Ozi - Pesticide n'etiti
Pesticide bu uzo di nkpa nke mmeputa na mmeputa ugbo, nke na aru oru di oke mkpa na ichikota oria, pests na ahihia, na-emezi ma na-emezi ihe ubi.
Agbanyeghi na onu ahia nke ihe ubi, ubi akuku, onodu ubochi, ihe ndi ozo na ihe ndi ozo, ire ahia ogwu na-ewetara ufodu mgbanwe nke cyclical site n’afọ rue n’ulo, ma ochoro ka odi obere.
Dabere na data sitere na National Bureau of Statistics, mmepụta nke ọgwụ pesticides na mba niile egosiputa ọnọdụ na-ebelata kemgbe 2017.
N’afọ 2017, mmepụta nke ọgwụ pesticides ruru nde 2.941, mana na 2018 ọ ruru 2.083 nde tọn. Na 2019, mmepụta nke ọgwụ pesticides kwụsịrị ịda ma gbagoo 2.2539 nde tọn, elu 1.4 pasent afọ na afọ.
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ahịa ndị na-ere ọgwụ ahụhụ na China n’obodo ha n’obodo ha nọgidere na-ewu ewu.
Na 2018, n'ihi mmepe nke ọgwụ na-egbu ahụhụ na ịrị elu na ọnụahịa ngwaahịa, yana mmụba nke mkpa maka pesticides na mkpụrụ ego mkpụrụ ego dị ka owu na akụrụngwa, ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ ruru ijeri yuan 329.
A na-eme atụmatụ na ahịa ahịa nke ọrụ ugbo China ka ga-ebili na 2020.
Ngwongwo ogwu di iche iche choro ndi ozo di iche na usoro mmeputa.
Ngwaahịa nke ewepụtara site na ịkọpụta ihe eji akọ ugbo bụ kwa usoro nke na - agwakọta ihe abụọ ma ọ bụ karịa ọnụ.
Na ọgwụ ahụhụ nwere ike ịghọta dị ka synergist, makwaara dị ka organic intermediates.
Na mbụ na-ezo aka n'iji kol tar ma ọ bụ ngwaahịa mmanụ ala dị ka ihe akụrụngwa maka njikọ nke ngwa nri, dyes, resins, ọgwụ, plastik, ome osooso roba na ngwaahịa kemịkal ndị ọzọ, nke emere na usoro nke ngwaahịa dị n'etiti.
A na - ejikọ ihe njikọ nke ndị na - emechi ihe na igwe na - arụ ọrụ, na - ekewapụta ndị na - eme ihe dị iche iche ma dị ọcha, ọ na - abụkarị site na teknụzụ mmịpụta.
Pesticide intermediates na chloroform mmịpụta bụ kemịkal enterprise nkịtị unit ọrụ, omenala ọrụ usoro n'ozuzu adopts na distillation kọlụm, ụdị ọrụ a dị mgbagwoju anya, obere mmịpụta arụmọrụ, ike oriri bụ nnukwu, ya mere na mmụba nke na-elekọta mmadụ nkewa nke ọrụ na ọganihu nke teknụzụ mmepụta, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-amalite ịkwalite teknụzụ, wee họrọ usoro ọrụ dị irè karị.